Muxuu Baybalka ka dhahay danisoorka? Miyay ku jiraan danisoorka Baybalka?
Su’aal: Muxuu Baybalka ka dhahay danisoorka? Miyay ku jiraan danisoorka Baybalka?
Jawaab: Mowduuca dinisoorka ee ku jira Baybalka wuxuu qeyb ka yahay dood ka socota bulshada Kirishtaanka ee da’da dhulka, fasiraada saxda ah ee Bilowgii, iyo sida loo fasiro cadeymaha muuqdo waxaan ku aragnaa agagaarkeena oo dhan. Kuwa aaminsan da’da weyn ee dhulka waxay u janjeeraan inay ogolaadaan in baybalka uusan sheegin dinisoor, sababtoo ah, sida waafaqsan qaabkooda, dinisoorka waxay dhinteen malaayiin sanno ka hor inta ninka ugu horeeyay uusan ku socon dhulka. Ninka qoray Baybalka ma arki karin dinisoor nool.
Kuwa aaminsan da’da yar ee dhulka u janjeero inay ogolaadaan inuu sheegay Baybalka dinirsoor, inkastoo aysan marnaba isticmaalin erayga “dinisoor.” Badelkii, uu isticmaalo erayga Hebrew ee tanniyn, taas oo loo fasiray dhoor qaabab oo kala duwan ee Baybaladeena Ingiriiska ah. Mararka qaar waa “bahalka badda,” iyo mararka qaar waa “abeesada.” Waxaa inta badan loo fasiray “dareegon.” Tanniyn wuxuu u muuqday qaab mas weyn. Xayawaankaan waxaa lagu sheegay ku dhawaadkii sodon jeer Baybalka Hore oo waxaana laga helay labadaba dhulka iyo biyaha.
Intaa waxaa dheer sheegida masaskaan weyn, Baybalka wuxuu ku sheegay dhoor xayawaano qaab ee qaar ka mid ah aqoonyahanada aaminsanyihiin in qoraayaasha ay sharaxayeen dinisoorka. Xayawaanka behemoth ayaa la sheegay inuu ugu weynyahay hayawaanada Illaah uumay, bahal weyn oo dibkiisa u eyahay geedka cedar (Ayuub 40:15). Qoraayaasha qaarkood waxay isku dayeen inay u aqoonsadaan behemoth sida midkood maroodi ama jeer. Kuwa kale waxay tilmaameen in maroodiyada iyo jeerta ay leeyihiin dib aad u dhuuban, ma jiro wax lagu qiyaasi karo geedka cedar. Dinisoorka sida xayawaanka brachiosaurus iyo diplodocus, ee dhinaca kale, leh dib weyn kaas oo si sahlan loogu qiyaasi karo geedka cedar.
Ku dhawaadkii ilbaxnimada qadiimi walba waxay leedahay qaar ka mid ah fanka muujinayo xayawaanka maska weyn. Petroglyphs, artifacts, iyo xittaa qaababka dhooba yar ee laga helo Wuqooyiga Ameerika ee u dhigma muuqaalka dinisoorka. Sawirada dhagaxaanta ee muuqaalka nimanka Koonfurta Ameerika oo dul saaran xayawaanka sida diplodocus iyo, si la yaableh, u bartaan sawiro ay garanayaan ee sida-triceratops, sida-pterodactyl, iyo xayawaanada sida tyrannosaurus rex. Roman mosaics, Mayan pottery, iyo darbiyada caasimada Babylon dhammaan waxay cadeynayaan dhaqanka kala duwan ee aadanaha, soo jiidashada juquraafiga aan xadeysneyn ee xayawaanadan. Sober accounts sida Marco Polo’s Il Milione wuxuu isku daraa dibab cajiib ah ee kasnada keydisga duggaagta. Intaa waxaa dheer tirada la taaban karo ee cadeymaha jiritaanka ama taariiq ahaanta ee jiritaanka dinisooriyo aadanaha, waxaa jiro cadeymo jir ah, sida aastaamaha cagta aadanaha lafaha iyo dinisoorka oo laga wada helay meelo Wuqooyiga Ameerika iyo Aasiyada Bartamaha Galbeedka.
Marka, maku jiraan wax danisoor ah Baybalka? Arinta wa ka fogtahay dagitaan. Waxay ku xirantahay sida aad u fasirtid cadeymaha la heli karo iyo sida aad u aragtid aduunka ku haraareysan. Haddii Baybalka loo fasiray si macno leh, fasiraada dhulka yar way sababeysaa, iyo fikrada in jiritaanka dinisoorka iyo aadanaha la ogolaan karo. Haddii dinisoorka iyo aadanaha jireen, maxaa ku dhacay dinisoorka? Iyada oo aan Baybalka ka hadlin arinta, dinisoorka wuxuu u badanyahay inuu dhintay waqtiyada fatahaad kadib sabab la xiriirto isku darka badelka jawiga la xiriiro iyo xaqiiqda si aan fiicneen ay u ugaarsan jireen aadanaha.